बलिउडमा शाहरुख भन्दा छोरीको धेरै चर्चा - Purbeli News
बलिउडमा शाहरुख भन्दा छोरीको धेरै चर्चा
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक २०, २०७४ समय: २१:१४:१०
शाहरुख सँग आज के छैन पैसा,प्रतिष्ठा र प्रसिद्धि ? उनी बलिउडमा सफल मात्रै होइन, संघर्षले आज बलिउडमा जुन स्थान बनाए जो-कोहिले सोच्न सम्म सक्ने कुरा होइन। शाहरुखको उमेर ढल्किदैं छ।चढ्दो उमेरसँगै मानिसका सबैकुरा विस्तारै हराउँदै जान्छ। सुन्दरता,चर्चा,क्षमता यो कसैले पनि रोक्न-छेक्न सक्ने कुरा होइन।
उमेर चढे पनि शाहरुखको चर्चा भने कम भएको छैन र उनी यति छिट्टै बलिउड बाट हराउने सेलिब्रेटि पनि होइनन्। तर अहिले बलिउडमा शाहरुखको भन्दा पनि उनको छोरीको धेरै चर्चा चल्न थालेको छ।उनकी छोरी सुहनाले के खाइन्,के लगाइन्,आनीबानी कस्तो छ,यस्तै-यस्तै? मिडियाहरुले उनलाई एकदमै पछ्याउने गर्छन्।
बुधबार आफ्ना बाबु शाहरुख सँग जन्मदिनको पार्टि मनाएर फर्केकी सुहाना र उनका साथीहरुको फोटो मिडिया र सामाजिक संजालमा भाइरल भइहाल्यो। यतिमात्रै होइन, शाहरुखकी छोरीसँग फोटो खिचाउन बलिउडका ठूला सेलिब्रेटिले पनि रहर गरे। जसमा दिपिका पादुकोण र करण जौहर जस्ता चर्चित सेलिब्रेटिहरु थिए।